Revlon ရဲ့ PhotoReady Candid™ Collection လေးမှာ ဘာတွေပါမလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » Revlon ရဲ့ PhotoReady Candid™ Collection လေးမှာ ဘာတွေပါမလဲ?
CM ပရိသတ်တွေအတွက် အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Product လေးတွေကတော့ Revlon ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ PhotoReady Candid Collection ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုတော့ လောလောဆယ် ဒီမှာဝယ်ယူလို့ မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမြဲနောက်ကျမှ ရောက်လာတက်တာကြောင့် မကြာခင်မှာတော့ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ အက်မင်အနေနဲ့ကတော့ Gal Gadot ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Ad လေးဖြစ်လို့ ပစ္စည်းဝယ်ပြီး သုံးဖြစ်ဖြစ် မသုံးဖြစ်ဖြစ် ဒီ collection လေးကိုတော့ တကယ်ဘဲ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို ဒီ collection လေးမှာ ဘာပစ္စည်းလေးတွေပါမလဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Foundation, Concealer, Setting Powder ဆိုပြီး Product (၃ ) မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ PhotoReady Candid Natural Finish Anti-Pollution Foundation မှာဆိုရင်တော့ အရောင်တော်တော်စုံပြီး အသားအရောင်အမျိုးမျိုးအတွက် အရောင်ပေါင်း (၃၁) ရောင်တောင် ထုတ်လုပ်ထားလို့ ဘယ်လိုအသားရောင်ပိုင်ရှင်မျိုးတွေအတွက်မဆို အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ foundation လေးရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ လိမ်းလိုက်တဲ့အချိန် မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ comfortable ဖြစ်ပြီး moisturizer ပါဝင်တာကြောင့်လည်း အသားရေခြောက်တာမျိုးတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။ နောက်တခုကတော့ creamy type ဖြစ်တဲ့အတွက် လိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း အရမ်းကြီး ပွတ်ဆွဲလိမ်းပေးစရာမလိုတာကြောင့် အရေပြားတွန့်ခြင်းနဲ့ လျော့တွဲခြင်းကိုလည်း မဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ စျေးနှုန်းအားဖြင့် $ 10.99 ဆိုတော့ Revlon ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အရည်သွေးကောင်းပြီး စျေးနှုန်းချိုသာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Foundation အကြောင်းလေးပြီးပြီဆိုတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ make up look တခုအတွက် မပါမဖြစ် Concealer အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ ဒီ collection မှာ ပါဝင်တဲ့ Concealer လေးဟာဆိုရင်လည်း အရောင်ပေါင်း (၁၈) ရောင်တောင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး တခြား brand တွေမှာပါ တွေ့ရနည်းတဲ့ အသားရောင်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ medium-coverage ထိပေးနိုင်တာကြောင့် အမဲဆက်နဲ့ဝက်ခြံတွေကိုတော့ လုံးဝကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း $9.99 ဆိုတဲ့အတွက် စျေးချိုတဲ့ Concealer အမျိုးအစားဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး product လေးတခုဖြစ်တဲ့ PhotoReady Candid Anti-Pollution Setting Powder လေးအကြောင်း ဆက်ပြောမယ်နော်။ ဒီ loose setting powder လေးကတော့ Natural look ကို ရရှိစေပြီး လိမ်းထားမှန်းမသိအောင်ကို မှုန့်ညပ်နေတာကြောင့် သဘာဝဆန်ဆန်လှချင်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ အရောင်အားဖြင့် ရွေးခြယ်စရာ (၃) မျိုးရှိလို့ အသားရောင်အမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နော်။
ကဲ ဒါဆို လောလောဆယ် ထွက်ရှိထားတဲ့ PhotoReady Candid Collection ထဲက Product လေးတွေအကြောင်းကို အားလုံးသိအောင် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ Cosmetic ချစ်သူတွေ စိတ်ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
Tags: collectionsConcealerFoundationLoose Powder